Author: Mezil Tojagis
Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda. Cutubka kusaabsan dastuurada dowlad goboleedyada Cutubka 13 ee Dastuurka Qabyada ah wuxuu sharaxayaa in dowlad goboleedyadu ay sameeyaan dastuuro ay ayagu leeyihiin oo waafaqsan Dastuurka Federaalka iyo mabaadiida aasaasida.
Qodobka aad-Muddada Xaafiiska Madaxweynaha iyo Madaxweyne-Ku-Xigeenka Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo xili oo midkiiba uu yahay 5 sano. Markii ugu dambeysay ee Puntland ay go’aan mid kaa la mid ah qaadatana waxa ay ahayd dii bishii Luuliyo, kii, xilligaas oo uu khilaaf soo kala dhexgalay madaxweynihii hore, Xasan Sheekh Maxamuud soomaaliiya maamulka Puntland.
Dastuurka Qabyada ah wuxuu aad uga hadlayaa waxa ka dhaca Muqdisho maadaama ay tahay caasimada federaalka, ee nidaamka federaaliga ah. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa madaxa Qaranka iyo xukuumadda, waana astaanta midnimada Qaranka. Marar badan oo hore maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in xiriirka ay u jartay dowladda dhexe.
Nidaamka Federaaliga ah qeyb kama uusan ahayn qorshihii hore ee Soomaaliya markii laga asaasayay midoobidii dhulalkii ay kala gumaysan soomaaliay Ingiriiska iyo Talyaaniga.
Haddi kale waqtigaas waxaa loo tixgelinayaa in uusan aheyn muddo xileed marka la fiiriyo u jeedooyinka qodobka ee muddo xileedka Madaxweynaha. Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska.
Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa. Markaas Soomaaliya qeyb qeyb ayay ahayd oo laba gobol ayaa dowlado dhistay kuwaasoo ahaa kuwo shaqeynaaya oo leh dastuuradooda.
Bishii June maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa sidoo kale kasoo horjeedstay xeerka isgaarsiinta qaranka oo golaha wasiirada meelmariyeen, waxayna maamulada sheegeen in dowladda federaalka ay hareermartay waxyaabihii horey looga heshiiyay ee xeerkan ku saabsanaa oo dhan. Guddiga Xorta ah ee Dastuurka Federaaliga ayaa go,aan ka gaari doona midka saddexdaas arimood la qaadanayo marka sidaa laga maqlo la tashiga dadweynaha.
Nidaamka Federaaliga iyo Qaranimada Soomaaliya federalka Sebtembar Dalalka kale Adlas Siyaasadda portal. Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan. Arrintaas ayaa hadda si rami ah u dhacday kadib markii xildhibaano ay mooshin ka gudbiyeen Safiirka imaaraatka carabta ee Soomaaliya u jooga, oo ay ku federaqlka in uu farogalinayo arrimaha gudaha ee Soomaaliya.
Qodobka aad-Awooda Madaxweynaha Awoodaha madaxweynaha waa: Qormadan tii ka horeysay ee ay BBC-da ka qortay arrintan ayaa waxa ay ku sheegnay in ay jirto saansaan ah in muranka laga yaabo in uu u talaabo dastuuurka. Hase yeeshee lama xusin dowladahaas kale. Dowlad goboleedyo cusub ayaa laga dhisi karaa dhulka ku yaala jamhuuriyada gudaheeda markii ay daruufo jiraan. Soomaaliya Waxay kamid tahay Dalalka ugu Faqrisan aduunka, Ma jiro Fayo-dhawr guud oo kafaala qaadaya caafimaadka asaasiga ah ee Muwaadinka Soomaaliyeed.
Waxaa xusid mudan in mooshinka ay hormuud ka yihiin xildhibaano horey dowladda ugu eedeeyey in ay Itoobiya ku wareejisay muwaadin Soomaaliyeed, arrintaas oo markii dambe loo saaray guddi soo baara. Xaaf ayaa dowladda federaalka ku eedeeyay in ay feederaalka qaawan ku hayso maamulka Galmudug, wuxuuna yiri “Waxaan reer Galmudug iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dowlad skomaaliya iyo dowladaha caalamka iyo UN-ka ogeysiinayaa arrinta faragelinta ah ee dowladda federaalka nagu hayso in ay tahay dhabar jab reer Galmudug ka dhan ah”.
Kadib markii lasoo xulay Xubnaha Dastuuroa Ayeey waxay doorteen Gudoomiyaha Baarlamaanka ama Afhayeen, waxay markale duurteen Madaxweyne oo isgana sii xushay Raiisul wasaare, Sidaas ay dawladdu ku tahay Baarlamaani oo wax walba Baarlamaanka ayaa soo go’aaminaya.
Badmareenka Soomaalida Ciidanka Xoogga. Guddiga Xorta ah ee Dastuurka Federaaliga wuxuu bixinayaa saddex ikhtiyaar oo la kala dooran karo: Waxaase xaalka uga sii daraya in aysan jirin meel lagu kala boxo, sida maxkamad federsalka ah oo aanan wali dhisnayn, taas oo go’aan ka gaari lahayd arrimaha ceynkan oo kale ah oo la’isku qabsado.
Federal Government of Somalia waa dawlad ay caalamku aqoonsanyihiin Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha inta dacwaddiisu ka dhammaaanayso.